Akụkọ - Bigfish Bio-tech Co., Ltd. sonyeere na 10th International Forum na enyemaka teknụzụ
Bigfish Bio-tech Co., Ltd. sonyeere na 10th International Forum na enyere aka maka ịmụ nwa
Nzukọ nke International Forum nke 10 maka enyemaka ịmụ nwa, nke ụlọ ọrụ ọmụmụ ọmụmụ olileanya ọhụrụ, Zhejiang Medical Association na Zhejiang Yangtze River Delta Institute of Health Science na teknụzụ, ma bụrụ ndị ụlọ ọgwụ Zhejiang na-elekọta, mere na Hangzhou site na June 16 ruo 17, 2018 Jenetik omumu na embryology na ubi ndi ozo iji mepu okwu nkuzi na mkparita uka.
Dị ka onye ngosipụta nke nzukọ a, Bigfish Bio-tech Co., Ltd. sonyere na ngosi ahụ na ngwa ndị mepụtara onwe ha, dị ka onye na-enyocha mkpụrụ ndụ aka, pipette, electrophoresis instrument na atomic acid extraction instrument, yana mmekọrịta miri emi. ndi okacha amara n’ulo oru n’ile di iche-iche na esonye na nzuko a. Ndị ọkachamara toro Bigfish ngwaọrụ ndị mepụtara onwe ha, ma wepụta ọtụtụ aro bara uru maka mmelite.
N'oge ogbako ahụ, Bigfish Bio-tech Co., Ltd. ruru ebumnuche nke imekọ ihe ọnụ na New Hope Fertility Center nke United States na ọkachamara IVF a ma ama Dr. Zhang Jin iji mepụta nchọpụta mkpụrụ ndụ embrayo na-enweghị mmebi, PCR dijitalụ na nke na-esote -nke nchikota ndu na usoro ihe omumu. Akụkụ abụọ ahụ ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji guzobe ụlọ nyocha njikọ na United States ma jikọta akụ nke Mahadum Zhejiang maka nyocha agụmakwụkwọ metụtara ya.
Na-enyocha saịtị ngosi ahụ, ndị sonyere gara leta ngwaahịa metụtara teknụzụ omumu nke ụlọ ọrụ dị iche iche wetara mgbe ezumike tii ahụ gasịrị. E nwere mkparịta ụka na-enye ọ Excụ ma na-agba ume. Anyị ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ha R & D ngwaahịa dọtara ukwuu ntị.